नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अन्तरिम आदेश दिएनन् , संवैधानिक इजलासमा पठाए !
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अन्तरिम आदेश दिएनन् , संवैधानिक इजलासमा पठाए !
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भनेर दाबी गर्ने पक्षको माग अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अन्तरिम आदेश दिएनन् । बरु यो संवैधानिक विषय भएको र अर्को पक्षको पनि भनाइ सुन्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् । संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालत एउटा निर्क्याेल पुग्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै भनेका छन्–प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संविधानको एउटै धारा ७६ मात्रै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वाेच्च अदालतले निर्क्याेल गर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि उनीहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती सबै रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाललगायतले बुधवार बहसमा भाग लिएर प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने बताएका थिए । यससँगै संवैधानिक इजलास के हो र यसले के गर्छ ? भन्नेबारे आमचासो बढेको छ ।
Posted by www.Nepalmother.com at 8:33 PM